रोबोटिक्स उद्योगको लागि सीएनसी मेसिन किन महत्त्वपूर्ण छ? - समाचार - शेन्जेन सनब्राइट टेक्नोलोजी कं, लि
CNC मेसिनिङ रोबोटका लागि टेलर-बनाइन्छ
सबै भन्दा पहिले, सीएनसी मेसिनले धेरै छिटो नेतृत्व समय संग भागहरु उत्पादन गर्न सक्छ। तपाईंले थ्रीडी मोडेल तयार गरिसकेपछि, तपाईंले कम्पोनेन्टहरू बनाउन CNC मेसिनहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसले प्रोटोटाइपहरूको द्रुत पुनरावृत्ति र व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको लागि अनुकूलित रोबोटिक भागहरूको द्रुत डेलिभरी सक्षम गर्दछ।
सीएनसी मेसिनिङको अर्को फाइदा यो हो कि यसले विनिर्देशहरू पूरा गर्ने भागहरू सही रूपमा निर्माण गर्न सक्छ। यो उत्पादन सटीकता विशेष गरी रोबोटिक्सको लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने आयामी शुद्धता उच्च-प्रदर्शन रोबोटहरू निर्माणको लागि कुञ्जी हो। सटीक CNC मेसिनले +/-0.0002 इन्च भित्र सहनशीलता राख्न सक्छ, र यो भागले रोबोटलाई सटीक र दोहोर्याउन मिल्ने चालहरू प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
रोबोटिक भागहरू उत्पादन गर्न सीएनसी मेसिन प्रयोग गर्नुको अर्को कारण सतह फिनिश हो। अन्तरक्रिया गर्ने भागहरूमा कम घर्षण हुनु आवश्यक छ। प्रेसिजन सीएनसी मेसिनले Ra 0.8¼m जति कम सतहको खुरपना भएका भागहरू उत्पादन गर्न सक्छ, वा पॉलिशिङ जस्ता कार्यहरू पूरा गरेपछि पनि कम हुन्छ। यसको विपरित, डाइ कास्टिङ (कुनै पनि परिष्करण अघि) सामान्यतया 5¼m नजिक सतह खुरदना उत्पादन गर्दछ। मेटल थ्रीडी प्रिन्टिङले रफ सतह फिनिश उत्पादन गर्नेछ।
अन्तमा, रोबोटले प्रयोग गरेको सामग्रीको प्रकार सीएनसी मेसिनको लागि आदर्श सामग्री हो। रोबोटहरू स्थिर रूपमा वस्तुहरू सार्न र उठाउन सक्षम हुन आवश्यक छ, र तिनीहरूलाई बलियो र कडा सामग्री चाहिन्छ। यी आवश्यक गुणहरू निश्चित धातु र प्लास्टिकहरू प्रशोधन गरेर प्राप्त गरिन्छ। थप रूपमा, रोबोटहरू प्राय: अनुकूलन वा सानो ब्याच निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसले CNC मेसिनलाई रोबोट भागहरूको लागि प्राकृतिक विकल्प बनाउँदछ।
CNC मेसिनद्वारा निर्मित रोबोट पार्ट्सका प्रकारहरू
धेरै सम्भावित प्रकार्यहरूसँग, धेरै प्रकारका रोबोटहरू विकसित भएका छन्। त्यहाँ धेरै मुख्य प्रकारका रोबोटहरू छन् जुन सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। अभिव्यक्त रोबोटको एकल हातमा धेरै जोडहरू हुन्छन्, जुन धेरै मानिसहरूले देखेका छन्। त्यहाँ एक SCARA (सिलेक्टिभ कम्प्लायन्स आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म) रोबोट पनि छ, जसले चीजहरू दुई समानान्तर प्लेनहरू बीच सार्न सक्छ। SCARA मा उच्च ठाडो कठोरता छ किनभने तिनीहरूको चाल तेर्सो छ। डेल्टा रोबोटको जोडहरू तल्लो भागमा अवस्थित छन्, जसले हतियारहरूलाई हल्का राख्छ र छिट्टै सार्न सक्षम बनाउँछ। अन्तमा, ग्यान्ट्री वा कार्टेसियन रोबोटहरूमा रैखिक एक्चुएटरहरू छन् जुन एक अर्कामा 90 डिग्री सर्छ। यी प्रत्येक रोबोटको फरक संरचना र विभिन्न अनुप्रयोगहरू छन्, तर त्यहाँ सामान्यतया पाँचवटा मुख्य कम्पोनेन्टहरू छन् जसले रोबोट बनाउँछ।
त्यहाँ मुख्यतया धेरै प्रकारका रोबोटहरू सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। अभिव्यक्त रोबोटको एकल हातमा धेरै जोडहरू हुन्छन्, जुन धेरै मानिसहरूले देखेका छन्। त्यहाँ SCARA (Selection Compliant Joint Robot Arm) रोबोट पनि छ जसले वस्तुहरूलाई दुई समानान्तर प्लेनहरू बीच सार्न सक्छ। SCARA मा उच्च ठाडो कठोरता छ किनभने तिनीहरूको चाल तेर्सो छ। डेल्टा रोबोटको जोडहरू आधारमा अवस्थित छन्, जसले हतियारहरूलाई हल्का राख्छ र छिट्टै सार्न सक्षम बनाउँछ। अन्तमा, ग्यान्ट्री वा कार्टेसियन रोबोटहरूमा रैखिक एक्चुएटरहरू छन् जुन एक अर्कामा 90 डिग्री सर्छ। यी प्रत्येक रोबोटको फरक संरचना र विभिन्न अनुप्रयोगहरू छन्, तर सामान्यतया5मुख्य घटकहरू छन्:
1. रोबोटिक हात
रोबोट हतियारहरू फारम र कार्यमा धेरै फरक हुन्छन्, त्यसैले धेरै फरक भागहरू प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, तिनीहरूसँग एउटा कुरा साझा छ, त्यो हो, तिनीहरूले वस्तुहरू सार्न वा हेरफेर गर्न सक्छन् - यो मानव हातबाट फरक छैन! रोबोट आर्मका विभिन्न भागहरू हाम्रो आफ्नै भागहरूको नामबाट पनि नाम दिइएको छ: काँध, कुहिनो र नाडी जोर्नीहरू घुमाउँछन् र प्रत्येक भागको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्छन्।
2. अन्त प्रभावकर्ता
अन्तिम प्रभावकर्ता रोबोट हातको अन्त्यमा जोडिएको सहायक उपकरण हो। अन्तिम प्रभावकर्ताले तपाईंलाई ब्रान्ड नयाँ रोबोट निर्माण नगरीकन विभिन्न कार्यहरू अनुसार रोबोटको कार्यहरू अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरू ग्रिपर्स, ग्रेबरहरू, भ्याकुम क्लिनरहरू वा सक्शन कपहरू हुन सक्छन्। यी अन्तिम प्रभावहरू सामान्यतया धातु (सामान्यतया एल्युमिनियम) बाट बनेको सीएनसी मेशिन भागहरू हुन्। कम्पोनेन्टहरू मध्ये एक स्थायी रूपमा रोबोट हातको अन्त्यमा जोडिएको छ। वास्तविक ग्रिपर, सक्शन कप वा अन्य एन्ड इफेक्टर यस एसेम्बलीसँग मेल खान्छ त्यसैले यसलाई रोबोट हातले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। दुई फरक कम्पोनेन्टहरू भएको यो सेटअपले विभिन्न अन्त प्रभावकर्ताहरू प्रतिस्थापन गर्न सजिलो बनाउँदछ, त्यसैले रोबोटलाई विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। तपाइँ यसलाई तलको छविमा देख्न सक्नुहुन्छ। तलको डिस्कलाई रोबोटको हातमा बोल्ट गरिनेछ, जसले तपाईंलाई रोबोटको हावा आपूर्ति यन्त्रमा सक्शन कप सञ्चालन गर्ने नली जडान गर्न अनुमति दिन्छ। माथि र तल्लो डिस्क सीएनसी मेशिन पार्ट्स को उदाहरण हो।
(अन्त इफेक्टरले धेरै सीएनसी मेसिनिंग भागहरू समावेश गर्दछ)
प्रत्येक रोबोटलाई हात र जोर्नीहरू चलाउनको लागि मोटर चाहिन्छ। मोटर आफैंमा धेरै गतिशील भागहरू छन्, जसमध्ये धेरै सीएनसी द्वारा प्रशोधन गर्न सकिन्छ। सामान्यतया भन्नुपर्दा, मोटरले शक्तिको स्रोतको रूपमा केही प्रकारको मेसिन गरिएको आवास प्रयोग गर्दछ, र यसलाई रोबोटिक हातमा जडान गर्ने मेसिन गरिएको कोष्ठक प्रयोग गर्दछ। बियरिङहरू र शाफ्टहरू पनि सामान्यतया सीएनसी मेसिन गरिएका हुन्छन्। व्यास घटाउनको लागि शाफ्टलाई खरादमा मेसिन गर्न सकिन्छ, वा कुञ्जी वा ग्रूभहरू जस्ता सुविधाहरू थप्न मिलिङ मेसिनमा मिसिन गर्न सकिन्छ। अन्तमा, मिलिङ, EDM वा गियर हबिङ प्रयोग गर्न सकिन्छ मोटर गतिलाई रोबोटको जोइन्ट वा अन्य गियरहरूमा स्थानान्तरण गर्न।
नियन्त्रक मूलतया रोबोटको मस्तिष्क हो, जसले रोबोटको सटीक गति नियन्त्रण गर्दछ। रोबोटको कम्प्युटरको रूपमा, यसले सेन्सर इनपुट स्वीकार गर्दछ र आउटपुट नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दछ। यसका लागि इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू राख्नको लागि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड (PCB) चाहिन्छ। इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू थप्नु अघि, PCB आवश्यक आकार र आकार प्राप्त गर्न सीएनसी प्रशोधन गर्न सकिन्छ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, सेन्सरले रोबोटको वरपरको वातावरणको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछ र यसलाई रोबोट नियन्त्रकमा फिड गर्दछ। सेन्सरलाई PCB पनि चाहिन्छ, जुन CNC द्वारा प्रशोधन गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ, यी सेन्सरहरू सीएनसी मेसिन गरिएको आवासहरूमा पनि स्थापित हुन्छन्।
6. कस्टम फिक्स्चर र निश्चित उपकरणहरू।
यद्यपि रोबोट आफैंको भाग होइन, धेरैजसो रोबोट सञ्चालनहरूलाई अनुकूलन फिक्स्चर र निश्चित उपकरणहरू चाहिन्छ। जब रोबोटले भागमा काम गरिरहेको छ, तपाईंलाई भाग ठीक गर्नको लागि फिक्स्चर आवश्यक पर्दछ। तपाईंले भागहरू सही रूपमा राख्नको लागि फिक्स्चरहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सामान्यतया रोबोटहरूलाई भागहरू उठाउन वा तल राख्न आवश्यक हुन्छ। किनभने तिनीहरू सामान्यतया एक-अफ अनुकूलित भागहरू हुन्, सीएनसी मेसिनिंग फिक्स्चरको लागि धेरै उपयुक्त छ।